कोरोनाले सिकाएकाे पाठ
अजय रिमाल काठमाडाैं, २९ वैशाख
चीनको वुहानबाट सुरु भएको काेराेना भाइरस (कोभिड– १९) संसारमा द्रुत गतिमा फैलिइरहेको आजको यथार्थ हो । यसको दीर्घकालीन समाधानको उपायको खोजीमा विश्व समुदाय नै लागिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि देशले सफलता हात पारेका छैनन्, प्रयास जारी छ ।
कोरोना भाइरसले याे लेख आज तयार पार्दासम्ममा विश्वभरमा २ लाख ८३ हजार ८ सय ७७ जनाकाे ज्यान लिइसकेकाे छ भने करिब ४० लाख ८१ हजार जना यसबाट संक्रमित भएको देखिन्छ ।
जुन विश्व समुदायका लागि ठूलो चुनाैतीको विषय हो । आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आज हम्मेहम्मे परिरहेको छ । बढ्दो मृत्युदर र उच्च संक्रमण दरले विश्व नै स्तब्ध भएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि सतर्कता अपनाउन अपिलबाहेक थप अन्य सशक्त कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।
मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको काेराेनाले सिंगो संसारलाई नै आतंकित बनाई विषम परिस्थितिको अवस्था सृजना गरेको छ । आज संसारका देशहरूले लकडाउनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कोरोना भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न अल्पकालीन अस्त्रको रूपमा लकडाउन नै प्रयाेगमा आएसँगै सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू ठप्प हुन पुगेका छन् ।
काेराेना महामारीकाे उत्पत्ति भएकाे देश चीनले पनि औषधि पत्ता नलागेकाे अवस्थासम्मका लागि महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन लकडाउन नै उपयुक्त विधि भएकाे निर्क्याेल निकाली काेराेनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेकाे छ । तर लकडाउनबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको यथार्थ जगजाहेर छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको असर व्यापक रूपमा देखा पर्न थालिसकेकाे छ ।
के विकसित, के अल्पविकसित सबै मुलुक आ–आफ्नो अर्थतन्त्रप्रति बढी चिन्तित हुन पुगेका छन् । मानव सभ्यतालाई नै चुनाैती दिएकाे काेरोना महामारीले विश्व समुदायलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । आर्थिक वृद्धिदर निकै खुम्चिने, बेरोजगारी व्यापक वृद्धि भई गरिबी बढ्ने, भोकमरीलगायत विभिन्न नकारात्मक असरहरू विश्व समुदायमै आइपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
कोभिड १९ ले सिकाएको पाठ
काेराेनाले विश्व समुदायलाई नै अकल्पनीय पाठ सिकाएकोमा भने दुई मत छैन । कोभिड– १९ ले मानव समुदायलाई सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ भन्ने एउटा विशेष सन्देश दिएकाे छ । कुनै पनि भाइरसबाट बच्न सरसफाइ नै पहिलो एजेन्डा हो । स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो भन्ने नारा आजको मितिमा थप सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । अतः कोभिड– १९ ले तपसिल बुँदाहरूमा मानव समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जुन कुनै पनि महामारीबाट बच्नका लागि न्यूनतम आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ ।
१) स्वास्थ्य सेवामा पहुँच
२) सबैका लागि सधैँका लागि
३) आधारभूत सरसफाइ
४) समानतामा आधारित योजना
५) स्वास्थ्यमाथिको सचेतना
कोभिड– १९ ले प्रभाव पार्ने पक्षहरू
कोभिड– १९ ले गर्दा आज विश्व नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । जसले गर्दा मानवीय क्रियाकलाप नै ठप्प भएको छ । रोगबाट बच्ने र भोकसँग लड्ने दुवै कार्य एकसाथ गर्नुपर्ने आजको विडम्बना हो । तसर्थ कोभिड– १९ ले निम्नानुसारको प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
१) मानवीय पक्ष
२) सामाजिक पक्ष
३) आर्थिक पक्ष
कोभिड– १९ र नेपाल
कोरोना भाइरसको संकटसँगै विभिन्न प्रश्नहरूको उठान भएको छ । अझ हाम्रोजस्तो मुलुकमा कोभिड– १९ ले ठूलै धक्का दिनेछ भनी विश्लेषण भइरहेको सन्दर्भमा विश्वकै शक्तिशाली भनिएका देशहरूसमेत हल्लिएको समयमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेकाे छैन । तसर्थ कोभिड– १९ विश्वकै लागि चुनाैती हाे र यससँगसँगै याे अवसर पनि हाे । यसलाई अवसरकाे रूपमा लिएर सदुपयाेग गरिनु उत्तम हुन्छ ।
संकटले आत्मनिर्भरतातर्फ अवसर सिर्जना गर्दछ । त्यसले गर्दा पनि अत्यन्त असहज परिस्थितिमा पनि सचेतनाका साथ अगाडि बढ्ने पाठ काेराेनाले सिकाएकाे छ । अब प्रश्न उठ्छ– अगाडि कसरी बढ्ने ? परनिर्भरतामा आश्रित हाम्रो मुलुकलाई आगत दिनहरू त्यति सकारात्मक नभए पनि कोभिड– १९ ले देखाएको यथार्थलाई मनन गर्दै सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको गोलमेच सम्मेलन गरी त्यसले निकालेका निष्कर्षलाई समावेश गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
रेमिट्यान्सको भरमा चलेकाे नेपालकाे अर्थतन्त्रलाई निश्चित रूपमा ठूलो झट्का लाग्ने देखिन्छ । विश्वभरि रहेका नेपालीहरू ढिलोचाँडो मुलुक फर्कन सक्ने हुँदा सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न जरुरी छ । किनकि उनीहरूको आगमनसँगै एकातिर रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउँछ भने अर्कोतिर स्वदेश फर्केका ती युवायुवतीहरू बेराेजगार बन्नेछन् र सरकारलाई गाँस, बास र रोजगारको उचित व्यवस्थापन गर्न नै कठिन पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले प्रवासी नेपाली फर्केपछि तिनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अहिलेदेखि नै याेजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
आज पनि हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर छैनौँ, आयातको भरमा बाँचिरहेका छौँ । जीवनमा चाहिने सानोभन्दा सानोदेखि ठूला सामानसम्म आयात गर्ने शृंखलामा हामी रमेका छौँ । परनिर्भरताबाट मुक्कोति पाउनका लागि याे काेराेना महामारी वरदान पनि सावित हुन सक्छ । तर, याे चुनाैतीलाई हामीले अवसरकाे रूपमा परिणत गर्न उचित याेजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्य पक्षले एक किसिमको विश्वास जगाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, कोभिड– १९ भन्दा अगाडिको अवस्था र कोभिड– १९ पछि आइपर्न सक्ने अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्दै मानवीय, सामाजिक, आर्थिक पक्षमा परेका प्रभावलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । साथै, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयाेग लिई स्पष्ट खाका तयार पारेर अगाडि बढ्न सके निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
(लेखक कृषि विकास बैंकका विभागीय प्रमुख हुन् )
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७, १४:२४:००
ढोकामा कोरोना छ, पेटमा मुसा; के गरौँ सरकार !
२०६३ सालको त्यो घोषणा र नवराज विकको नियति
कोभिड- १९ र नगदरहित समाज